Svikiro Kubudirira Filter Fekitori | China Medium Efficiency Filter Vagadziri, Vatengesi
homwe muhomwe mweya yekuchenesa wepakati kunyatsoita synthetic fiber firita
Sefa inotora nyowani isina kurukwa firita yekugadzira faibha (firita inopa hunyanzvi hwe60-65%, 80-85%, 90-95% uye vamwe), mushure mekuumba, ine hunyanzvi hwekusefa, guruva rakakura rekubata, yakaderera kuramba, yakaderera mashandiro emari uye zvimwe zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mumhepo inovhuvhuta mhepo yekuchenesa mweya-kutonhodza sisitimu, yekuchenesa mweya sisitimu uye yekumwaya nyowani yemhepo yekupa system, inogona zvakare kushandiswa seyakafanogadzira-firita yemhando yepamusoro firita yekuwedzera hupenyu hwayo hwebasa. Iyo yakajairika ambient tembiricha yekushandisa iri pasi pe80 degrees. Pane maviri akateedzana emuganhu zvinhu: kwakakurudzira kupeta chikamu uye aluminium alloy.
v-mhando yepakati kunyatsoshanda v bank mhepo firita
Sefa inotora V-BANK firita yepakati performance (firita inopa kushanda kwe
60-65%, 80-85%, 90-95% uye vamwe), mushure mekuumba, ine hunyanzvi hwekuita, guruva rakakura rekubata, hukuru hwemhepo yekuchenesa mweya uye zvimwe zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mumhepo yekupedzisira yekuchenesa mweya-kutonhodza sisitimu, yekuchenesa mweya sisitimu uye yekumwaya nyowani yemhepo yekupa system, inogona zvakare kushandiswa se pre-firita ye Ultra kunyatsoshanda firita yekuwedzera hupenyu hwayo hwebasa. Iyo yakajairika ambient tembiricha yekushandisa iri pasi pe80 degrees.